दुइ दिन अझै हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना !! सतर्क रहन आग्रह ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Weather Forecast/दुइ दिन अझै हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना !! सतर्क रहन आग्रह !
दुइ दिन अझै हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना !! सतर्क रहन आग्रह !
काठमाडौं, बैशाख २२ । देशभर बदली`सँगै वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वा`नुमान महा`शाखाले आगामी तीन दिन पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव अझै सक्रिय अवस्थामै रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
सोमबार देशको अधिकांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका धेरै स्थानहरुमा र पश्चिमी भू–भागमा केहि स्थानहरूमा मेघगर्जन,चट्याङ्ग र असिनासहित वर्षा`को सम्भावना रहेको छ। मंगलबारसमेत देशको अधिकांश भू-भा`ग`मा सामान्यदेखि पूर्ण बदली कायमै रहने जनाइएको छ ।
सोमबार देशको अधि`कांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका धेरै स्थानहरुमा र पश्चिमी भू–भागमा केहि स्थानहरूमा मेघगर्जन,चट्याङ्ग र असिनास`हित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार` समेत देशको अधिकांश भू-भागमा सामा`न्यदेखि पूर्ण बदली कायमै रहने जनाइएको छ ।
सोमबार देशको अधिकांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका धेरै स्थानहरुमा र पश्चिमी भू–भागमा केहि स्थानहरूमा मेघगर्जन,चट्याङ्ग र असिना`सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मंगल`बार`समेत देशको अधि`कांश भू-भागमा सा`मान्यदेखि पूर्ण बदली कायमै रहने जनाइएको छ ।
आज पनि हावाहुरी सहित पानी पर्ने पूर्वा नुमान !!
आज पनि वर्षा हुने,` सचेत रहन मौसम पूर्वानुमान महा`शाखाकाे आग्रह
आज देखि ३ दिनको मौसम यस्तो छ, सत`र्कता अपनाउन अनु`रोध !
आज मुलुकभर २४ घण्टा सम्म व`र्षा हुने !!!